Mudama Kaabine: Oggansa ministeerota kana dura dubartootaan hinoganamne dubartootaan ogganuuf - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Muudamni dubartootaa biyya ijaaruu fi jijjiiruu keessatti gahee guddaa qaba jedhame
Muudamni ministirummaa Kibxata taree Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataatiin raggaasifame keessaa kanneen kana dura seenaa biyyattii keessatti dubartootaan ogganamuuf yaadamanii hinbeekne illeen dubartoota harka galaniiru.
Manni marichaa olmaa isaatiin lakkoofsa ministeerotaa 20tti gadi buuseen qooda minitirummaa dubartootaa fi dhiiraan walqixxa taasiseera.
Ministeerota 20 walitti dabalamuun hundeeffaman keessaa dubartootni 10 aangoo ministeerummaa akka raayyaa ittisa biyyaa fi kan haaraa hunda'ee ministeera Nagaarratti muudamaniiru.
''Biyyi kun erga uumamtee yeroo jalqabaatiif gara dimookraasitti ce'uf jijjiirama guddaa keessa jirti'' jetti hundeessituu dhaabbata 'qindoomina Oromootaa mirga namoomaa fi Dimookaarsiif' (Coalition of Oromos for Human Right and Democracy) aadde Seenaa Jimjimoo.
Namoonni siyaasaa amma aangootti dhufaa jiran qaroofi haala siyaasaa biyya kanaa kan sirri beekani jettee amanti aadde Seenaan.
''Itoophiyaaf qofa osoo hin taane biyyoota ollaatiifi addunyaaf nama jabaatu barbaachisa'' kan jettu falmituun mirga namaa kun ministirri muummee haalli itti kaabinee isaani ijaaran abdachiisaa fi kan hin baratamnee ta'uu dubbatte.
Roogeettii miidiyaa hawaasummaa kan taate adde Najaat Hamzaas yeroo darbe keessa dubartootni hunda hammatoo waan ta'aniif mataa uummata kanaa walitti qabaa turanii jechuun harkii walakkaa kaabinee haaraa MM dubartoota ta'uu dinqisiifatteetti.
Dubartootaaf bakki isaanii malu kennamaafii hin jiru komi jedhuf deebii kennuu caalaa bulchiinsi dubartootaan hoogganamu jijjiirama fiduu danda'a ejjennoo jedhurraa tarkaanfii fudhatame ta'uu akka malus Najaat ni himti.
''Gama kanaan ammas jijiiramni ilaalchaa, aadaa fi gochaa nu barbaachisa'' jetti. Jijjiirama barbaadamu kana fiduuf muudamtoonni kunniin carraa banus yaada jedhu qabdi.
''Maatii bulchuun mataan isaa siyaasaa''
Ministirri muummee wayita kaabinee isaanii dhiyeessan muuxannoon dubartootni bulchiinsa maatii keessatti qaban siyaasa keessattis bu'aa buusuu danda'u jedhani akka amanan dubbataniiru.
Najaat ammoo ''maatii bulchuun mataan isaa siyaasaa'' jetti.
'Kan haadhasaa kabajutu biyyasaa kabaja'
''Maatii keessatti dubartiin yaada nama hundaa walqixa dhagahuu, kan mufate yoo jiraate araarsuun dhaloota boruu qaruun hawaasa ijaarti'' jetti.
Dubartootni aangoo olaanaatti dhufan muuxannoo qaban barnoota wajjin dabaaluun aangoon kan ummata ittiin tajaajilaniifi biyya ittiin ijaaran ta'uu akka yaadachiisan shakkii hin qabus jetti Najaat.
Biyyootni addunyaa ciccimoon akka Jarmanii fi UK dubartootaan hoogganamaa jijjiirama gurguddoo fidaa jiraachuu yaadachuun kanaaf dubartootni amma muudaman kunis muuxannoo fi beekumsa qabaniin jijjiirama fiduu danda'u jetti.
Muudamoota dubartootaa kana adda kan godhu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa yeroo duraatiif dubartiin hooganamuu isaati.
Haaluma kanaanis, Injinar Ayishaa Mohaammad bakka Obbo Mootummaa Maqaasaa bakka bu'u.
Dhaabbilee jajjaboo hedduu of keessatti hammachuun ministeera reefuu hundaa'e ministeera nagaa immoo Af-yaa'iin duraanii mana maree Aadde Mufariyaat Kamiil ni hogganu.
Kunis, Ministira Muummee itti-aanuun dubartii aangoo guddaa qabdu isaan taasisa.
Uummanni akka amantaa dhaabbileerraa qabaatu gochuuf…
Dhaabbileen hojii hojjechuuf carraaqqii taasisan jiru. Harki caalaan garuu sirreeffama bal'aa akka barbaachisu ilaaluuf yaalameera.
Uummanni amantaa dhaabbilee irraa yoo hin qabaanne dhaabbanni kamiyyu akka dhaabbataatti itti fufuu hin danda'u kan jedhan Dr. Abiy amanamuun waan jalqaba irrratti barbaachisaa ta'edha. "Jijjiiramni kun caasaan qofaan osoo hin taane amanamummaan akka jiraatu taasisuudhaaf ta'uu qaba."
Dhimma dhaabbileen mootummaa irra deebiin gurmeessuufi kaabinoota dhaabbil ee kana gaggeessanirratti hayyuun maal akka jedhu iyyaafanneerra.
Gulaalaa Ol-aanaa gaazexaa 'The Ethiopian Herald' duraanii kan ta'aniifi siyaasa Itoophiyaa Hayyuu itti dhiyeenyaan hordofan Obbo Dajanee Tasammaatiif gaaffii kaabineen Dr. Abiy kun jijjiirama jiru kana baachuu danda'aa kan jedhu dhiyeessineef.
Jijjiirama kana kaabinee qofatu baata jennee osoo fudhachuu b aannee kan jedhan Obbo Dajaneen, "kun akka fuula duratti deemuuf yoo barbaadame kkaabinee ykn ADWUI irra darbee uummata kan dabalatu, fedhii hawwaasa kan dabalatu, qeerroo kan dabalatu, akkasuma dhaabbileen dorgomtootaa kan dabalatu ta'uu qaba".
Naannolee reefuu guddachaa jiran aangoo guddaa qabsiisuu
Caasaan mootummaa Federaalaa duraan lakkoofsi isaa 28 gra 20tti gadi bu'uun isaa baasii hir'isuuf gama tokkoon tarkaanfii gaarii ta'uus himan hayyuun kun.
Karaa biraatiin keessumaa ministeerota gurguddaa haala kanaan dura argamee hin beekneen kan akka ministeera maallaqaafi dinagdee, ministeera ittisaa, akkasumas kan haaraa hundeeffama ministeera nagaa aanga'oota naannolee reefuu guddina irra jiraniin qabsiisuun waan haaraadha jedhan Obbo Dajaneen.
Dubartoota gara aangootto fiduu..
Yeroo kaabinoota muudamaaf dhiyeessan Dr. Waggoota darban keessa manni maree kun irra deddeebiyuudhaan hirmaannaan dubartootaa hanga isaaniif malu akka ta'u gaaffiin dhiyaataa kan ture yommuu ta'u Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif, tarii akka Afirikaattiyyu kan jalqabaa bifa ta'uun miseensota qabnu 20 keessaa 10 isaanii ykn %50 dubartoota ta'aniiru.
Obba Dajaneenis % 50 dubartoota taasisuunis tarkaanfii gaaridha jedhan.
Mana maree: Labsiin aangoo fi hojii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa federaalaa fooyyessu ragga'e
Mudama ministirootaa: Itoophiyaan ministiroota haaraa muudde 20 keessaa 10 dubartoota
Yaa'ii ADWUI: Yaa'iin ADWUI ija xinxaltoota siyaasaatiin